सेयर बजार – Page2– Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बुधबार सेयर बजार १०.७६ अंकको गिरावटसँगै १२३०.६० अंकमा कायम भएको छ । व्यापार र होटलबाहेक सबै उपसूचक घटेका छन् । दिनभरिमा १६५ वटा कम्पनीको १४ लाख ३६ हजार पाँच सय १२ कित्ता सेयर चार हजार सात सय …
बन्दीपुर केबलकार कम्पनीले बन्दीपूरबासीका लागि सेयर खुलायो, कति किन्न पाइन्छ ?
तनहुँको बन्दीपुर केबलकार कम्पनीले बन्दीपुरवासीका स्थानीयका लागि केबलकारको सेयर खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले पूर्वघोषणा गरे बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि सेयर खुल्ला गरेको हो । बन्दीपुरमा बसोबास गर्नेले एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको शेयर खरिद गर्न सक्ने …
आँखु खोला हाइड्रोपावरको आईपिओ असोज २३ गतेदेखि
बैंकिङ खबर । आँखु खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले असोज २३ गतेदेखि २६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि १३ करोड ७६ लाख दुई हजार रुपैयाँको साधारण सेयर (आईपिओ) बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले धादिङ्गका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गर्दा नबिकेको सेयर समेत …
बैंकिङ खबर । मंगलबार सेयर बजार २.६९ अंकले बढेर १२४१.३६ अंकमा पुगेको छ । होटल, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स र उत्पादनमूलक समूह घटे पनि बैंकिङ, व्यापार, निर्जिवन बीमा, अन्य, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह बढेका छन् । दिनभरिमा १७१ वटा …
बैंकिङ खबर । सोमबार पनि सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । उत्पादनमूलक र व्यापारबाहेक सबै उपसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक १८.०४ अंकको गिरावटसँगै १२३८.६७ अंकमा कायम भएको छ । दिनभरिमा १६५ वटा कम्पनीको १७ लाख ६१ हजार आठ सय …
सुरु भयो विश्व लगानीकर्ता सप्ताह, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
बैंकिङ खबर । सोमबारदेखि विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सुरु भएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन सचेतना जगाउन सुरु भएको सप्ताह नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । सोमबार बोर्डले प्रभात फेरि कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपाल धितोपत्र …
आठ लाख १५ हजार कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्ने तयारीमा रु रु जलविद्युत परियोजना
बैंकिङ खबर । रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि आठ लाख १५ हजार चार सय १० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत …
बैंकिङ खबर । आइतबार सेयर बजार १०.४७ अंकले घटेर १२५६.७१ अंकमा कायम भएको छ । व्यापारबाहेक सबै उपसूचक घटेका छन् । दिनभरिमा १६६ वटा कम्पनीको २० लाख ८२ हजार नौ सय २० कित्ता सेयर पाँच हजार सात सय ५४ पटक …
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) यो साता १२.०७ अंकले बढेको छ । गत साताको अन्तिम दिन १२५५.०७ अंकमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक यो साता १२६७.१४ अंकमा आइपुगेको हो । यो साता कारोबार भएका चार दिनमध्ये, आइतबार र मंगलबार …
पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेष्टर्स फोरमको ३० बुँदे ज्ञापनपत्र
बैंकिङ खबर । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पुँजी बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धितोपत्र बोर्डलाई अवगत गराएको छ । फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बिहीबार गएको टोलीले बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई भेटर ३० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको …
शिवम् सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि ५० लाख ७९ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने
बैंकिङ खबर । शिवम् सिमेन्टले ५० लाख ७९ हजार सात सय ६० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितमा अवितरित भएको छ लाख ७९ हजार सात सय ६० कित्ता समेत थप गरेर उक्त अनुपातमा सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन …
बैंकिङ खबर । विहीबार पनि सेयर बजार घटेको छ । होटल र उत्पादनमूलकबाहेक सबै उपसूचक रातो भएपछि नेप्से परिसूचक १०.५६ अंकको गिरावटसँगै १२६७.१४ अंकमा कायम भएको छ । दिनभरिमा १६९ वटा कम्पनीको २१ लाख ९६ हजार नौ सय २६ कित्ता …
सेयर ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकरलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन : कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सेवा सुविधा देउ
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बोर्डको अध्ययनले सेयर दलाल र मर्चेन्ट बैकहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम …
बैंकिङ खबर । मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको सेयर बजार बुधबार घटेको छ । अन्य र जीवन बीमा बाहेक सबै उपसूचक ओरालो लागेपछि नेप्से परिसूचक २.३१ अंकको गिरावटसँगै १२७७.७४ अंकमा कायम भएको छ । दिनभरिमा १७१ वटा कम्पनीको ४५ लाख ७७ …
तीन वित्तीय संस्थाको लाभांश प्रस्ताव
बैंकिङ खबर । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कैलाश विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । कैलाश विकास बैंकको असोज ९ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ४०६ औं बैठकले चुक्ता …